Dalxiiska Caafimaadka Ma Amni?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Dalxiiska Caafimaadka Ma Amni?
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Faallo • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Marka ugu horeysa ee cilladda, dalxiiska caafimaadka wuxuu umuuqdaa fikrad wanaagsan. U safrida Thailand, UAE, ama Jarmalka - iyo intaad sahamineyso dhaqanka, cuntada, khamriga iyo dukaamada, ku joogso isbitaal maxalli ah caloosha calooshaada, kelyo ku tallaalidda ama sinta la beddelo.
Dalxiisayaasha caafimaadka waxay had iyo jeer ka gudbaan xuduudaha caalamiga ah daryeelka caafimaadka.
Daaweyntu waxay ka koobnaan karaan (laakiin aan ku xaddidnayn) kaaliyaha caafimaadka ilkaha, neerfaha, iyo wadnaha.
Dadku waxay diyaar u yihiin inay u safraan dayactirka caafimaadka, kor u qaadista, ama dib u soo celinta ka fog dalkooda si loogu qabto shaqo iyada oo loo marayo goobo caafimaad oo aad u jaban oo meelo kale ah.
Waa maxay waa Dalxiis Caafimaad?
Dalxiiska caafimaadka (oo sidoo kale loo yaqaan dalxiiska caafimaadka, bixinta caafimaadka ama safarka caafimaadka) waxaa lagu qeexaa safarka abaabulan ee ka gudbaya xuduudaha caalamiga ah si loo helo daaweyn caafimaad oo laga yaabo ama laga yaabo in laga heli waayo dalkiisa socdaalka. Dalxiisayaasha caafimaadku waxay had iyo jeer ka gudbaan xuduudaha caalamiga ah dayactirka, xoojinta ama dib u soo celinta caafimaadkooda iyagoo u maraya tas-hiilaadyo daryeel caafimaad oo la awoodi karo iyo daaweyn waxayna ku dari karaan (laakiin aan ku xaddidnayn) daaweynta ilkaha, neerfaha, iyo daaweynta wadnaha.
In 2019 ee suuqa dalxiiska caafimaadka adduunka wsida lagu qiimeeyay inta udhaxeysa US $ 44.8 billion iyo US $ 104.68 billion waxaana lafilayaa inay gaarto US $ 273.72 billion sanadka 2027